Taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradaka Ruushaka , Alexei Navalny”Jacaylka ayaa ka awood badan cabsida”?
Taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradaka , Alexei Navalny ee xiran ayaa guud ahaan dalka Ruushaka ka dhigay mudaaharaadyo looga soo horjeeda xiritaanka Navelny.
Dibadbaxayaasha ayaa waxay shidayeen nalal iyo waxyaabe kale oo iftiin bixinaya waxayna baraha bulshada ku baahiyeen halkudhiyo uu ka mid yahay ‘Jacaylka ayaa ka awoodbadan cabsida.’
Mid ka mikd ah dadka u ololeeya xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dhowr qof xabsiga loo taxaabay.
Dhanka kale dhowr boqol oo haween ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaaloyoonka Mowscow iyo St Petersburg kuwaasi isku duubni u miijiyay haweenka ay tacadiyada ka soo gaaraan dhibaatooyinka la xiriira siyaasadda sida afada Alexei Navalny ee Yulia.
Navalny ayaa xabsiga la dhigay bartamihii bishii Janaayo, xilli uu ka yimid magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, halkaas oo lagu daweynayay kadib markii la sumeeyay xilli uu safrayay bishii Agoost ee sanadkii hore.
Alexei oo ah nin si wayn ugu ololeeya ka hortaga musuqmaasuqa ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha, waxaa kaxeystay laamaha ammaanka ee dalka Ruushka. Mar uu arrintaas ka hadlay wuuxuu sheegay inay tahay tallaab lagu aamusiinayo isaga, wuxuuna taageerayaashiisa ugu baaqay inay isu soo baxaan.
Mr Navalny ayaa ah nin si wayn u dhaliila madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin. n
Qoraalka sawirka, Alexei Navalny
Sanadkii 2011 ayaa xabsiga la dhigay Mr Alexei Navalny islamarkana uu ku jiray muddo 15 maalmood ah, xilli ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo ku aadanaa in doorashada uu Putin ku shubtay.